မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ဘလက်ဂျက် စည်းမျဉ်းများ | BlackJack77
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blackjack လမ်းညွှန်ထဲမှာ, သင်လောင်းကစားရုံအနက်ရောင်ပေါက်နှင့်မည်ကဲ့သို့တစ်လိုလားသူများကဲ့သို့အနက်ရောင် jack ကိုကစားရန်ကစားရန်မည်သို့မည်ပုံအတိအကျရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအပါဆုံးအရာ Blackjack အပေါ်အလောင်းအစားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူလျက်ရှိ၏ အာမခံရွေးချယ်စရာအများအပြားမဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ကစားနည်းတိုင်းလက်အဘို့အကြံပြုထားတဲ့အပေါ်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဖဲဝေနေတဲ့အပြောင်းအရွေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: လောင်းကစားရုံ Blackjack ကစားရန်မည်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးသည့်အခါပထမဦးစွာဤဂန္ဂိမ်းမကြာခဏအများအပြားအားဖြင့်မေ့လျော့သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့ကိုဗဟိုပြုကိုသတိထားပါဖြစ်ရပါမည်။ ဖဲဝေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့်ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းများအားလုံးမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသော်လည်းကျော်ကို 21 get နှင့်အလောင်းအစားဆုံးရှုံးဖို့ပထမဦးဆုံးစွန့်စားမှုကစားသမားများကခေါ်ဆောင်သွားသည်။
သူတို့ပြီးနောက်တွေဆီကနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအရေးမပါဘူး: သင်သည်သင်၏အလောင်းအစားဆုံးရှုံးသွားပါပြီသောတကယ်တော့ထားပြီးလောင်းကစားရုံများအတွက်အနိုင်ရရှိကိုယ်စားပြုတယ်။ Blackjack ရိုးရှင်းသော play လုပ်နည်းစိတ်ထဲအတွက်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြောင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့်အနက်ရောင်ပေါက်ဆော့ကစားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များရ!
21 Blackjack ကစားရန်မည်သို့အတူတူပင်။ ကံကောင်းတာကသည်ငါတို့အဘို့, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအများစု mobility ပူဇော်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အိမ်တွင် Blackjack play ဖို့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Blackjack play ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပျော်စရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်, သင်ကဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုသိတယ်ထင်သည့်အရာများစွာကိုအားဖြင့်အံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်!
သူတို့ရဲ့နံပါတ်များကို 16 မှတ်အထိမျှတမှုအခါကုန်သည်အမြဲထိမှန်ရမယ်နဲ့တူဂိမ်းနီးပါးတိုင်းဗားရှင်းဆက်စပ်ကြောင်း Blackjack ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခု, ရှိ၏ သင်ပြုချင်င့်ကိုပထမဦးဆုံးအရာဂိမ်းရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ / app ကိုပေါ် layout ကိုဖတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအိမျတျောကိုကျော်သင်ပိုမိုအားသာချက်ပေးသောသူများဖြစ်ကြ၏, သို့သော်ဤကစားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဂိမ်းကိုမဆိုခွအေနမြေားအောအော်ပရေတာမျက်နှာသာဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းသတိရပါ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအရှိဆုံးရိုးရှင်းသော Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်:
အဆိုပါဆုရှင်တစ်ဦးချင်းစီကကစားသမားများနှင့်ကုန်သည်အကြား 21 စုစုပေါင်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာရရှိသွားတဲ့အကြင်သူသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားအိမျတျောကိုဆန့်ကျင်, မတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်တစ်ဦးချင်းအလောင်းအစား။
မျက်နှာကတ်များနှင့် 10 တကျိပ်မှတ်ရကျိုးနပ်များမှာအခြားကတ်များကိုအဘယ်သူမျှမ Joker ရှိပါတယ်, သူတို့ရဲ့မျက်နှာတန်ဖိုးများကိုရေတွက်ခြင်း, အေ့စ်ကစားသမား '' သမ္မာသတိမှာ, 1 သို့မဟုတ် 11 တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
အားလုံး Blackjack လောင်းကစားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနေရာတိုင်းကိုသင် Blackjack လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်အမှတ်ကဒ်နဲ့ Ace ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အားဖြင့်အလိုအလျှောက်အနိုင်ရနိုင်သည်ကိုသဘောတူပေမယ့်ပွဲစားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တခုတခုအပေါ်မှာ Ace ကိုရှိသည်မဟုတ်ရပါမည်။ သူတို့ပြုလျှင်, တကတွန်းအားပေးမယ့် (သင်ပြန်သင့်ရဲ့အလောင်းအစားရ။ ) ဤအရာတစျခုရယူခြင်းများသောအားဖြင့်5မှ2သို့မဟုတ်မှ63 ချေကိုအမြဲတမ်းကနည်းနည်းလေးပိုဆောင်းအားသာချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်32 မှစားပွဲပေါ်တွင်ဆော့ကစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
စံ Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနောက်ထပ်တဦးတည်း "အာမခံ။ " လာပြီဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာကုန်သည်အထိဖေါ်ပြခြင်းတစ်ခု Ace ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါသင်တစ်ဝက်သင်၏မူရင်းလောင်းကြေးအာမခံနိုင်ပြီး, သူ Blackjack ခဲ့လက်၏အဆုံးအားဖြင့်, သင်သည်ထိုအလောင်းအစားအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဇယားအပေါ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, သင်ကတောင်းဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
သငျသညျတူညီသောကဒ်များတစ်စုံ get အခါတိုင်းသင် "အုပ်စုခွဲ" သင်၏အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတခါတရံအကြိမ်လူတယောက်ငွေပမာဏအထိကိုသင်ပိုင်းခြားပြီးနောက်အခြားတူညီသောကဒ်ရလျှင်သင်သည်နောက်တဖန်ခွဲထွက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
တာဝန်ရှိသူတဦးက Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရ, သငျသညျတစျခုတညျးအပိုဆောင်းကဒ်တောင်းသင်၏မူရင်းလောင်းကြေး "ဆင်းနှစ်ဆ" ကိုအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာလကျခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
ပုံရဲ့အမှု၌, အထူးသဖြင့်, ဖဲဝေသူအားလုံး 17 ရဲ့ပေါ်မှာရပ်ရမယ်, ဒါပေမယ့် Blackjack အတွက်ခက်ခဲများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသနည်း အဆိုပါ Blackjack ကုန်သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖဲဝေ 17 ရဲ့အားလုံးပျော့ hit ရမည်ဟုတည်ထောင်ရန်သောအခါ, သူတို့ 11 (ပျော့ 17. ) အဖြစ်ထင်မှတ်ရဲ့တစ်ဦး Ace ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် 17 ကိုရောက်ရှိသည့်အခါကတ်တစ်ကတ်အဘို့အမေးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုနေသည်ဟုဆိုလိုသည်
ကအိမ်ရှင်အဖြစ်သောလောင်းကစားရုံမှသီးသန့်ဖြစ်ကြောင်း Blackjack အချို့ကိုနောက်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသုံးခုနစ်လီရတဲ့သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းခုနစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကတ်များဆက်ဆံခံရပြီးနောက်အနိုင်ရဘို့တိုးတက်သောထီပေါက်, အထူးဆုဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံ Blackjack အကြံပေးချက်များနှင့်အတူ, သငျသညျသိသိသာသာအွန်လိုင်း Blackjack တိုးအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သေချာသင်သည်ထိုသူတို့ကိုပြောင်းလဲအနိုင်ယူရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blackjack အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာလျက်နှင့်မအောင် ကျေးဇူးပြု. ; "hunches" ၌သင်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအခြေခံပြီးသို့မဟုတ်သင့်ဗီဇအတိုင်းလိုက်လျှောက်ရန်မကြိုးစားပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံနောက်ဆုံးမှာပိုပြီးငွေရှာဖို့အပေါ်အားကိုးတယျ။
ကတသမတ်တည်း Blackjack မှာအနိုင်ရဖြစ်နိုင်ပါသလော
လူအတော်များများကတ်များရေတွက်ခြင်းမရှိဘဲ Blackjack မှာအနိုင်ရပုံကိုမေးကြည့်ပါ။ အမှန်မှာ Blackjack ကျယ်ပြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်နိမ့်ဆုံးအိမ်သူအိမ်သားအစွန်းနှင့်အတူဂိမ်းအဖြစ်လူသိများကြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ တချို့ကကြောင့်ဆင်း 0.5% အဖြစ်သွားရစေခြင်းငှါတောင်းဆိုပေမယ့် 0% ရတော့မှပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Blackjack အနိုင်ရကြှနျတျောတို့၏သော့များကိုလိုက်နာတဲ့အခါမှာ, သင်ကအားရစရာအဘို့အတွက်ပါပဲ။ 0.5% ထားတဲ့အံ့သြလောက်အောင်အနိမ့်အိမျတျောကိုအစွန်းရှိ၏ ဒါဟာနီးပါးအကြွေစေ့လှန်လှောကြည့်အဖြစ်ပဲ! သငျသညျ print ထုတ်သေချာပါစေသို့မဟုတ်အဆင်ပြေလမ်းပေါ်မှာစစ်ဆေးနှင့်ပဲမိနစ်အနည်းငယ်အတွက်သင့်မိုဘိုင်းမှဗီဒီယို Blackjack မှာအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာထားရန်သင့်မိုဘိုင်းပေါ်မှာငါတို့ဇယား၏ရုပ်ပုံကိုစောင့်ရှောက်။
Blackjack မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း, လူနာဖြစ်သငျနှငျ့အတူအဆင်ပြေနေမှသာအဘယ်အရာကိုစွန့်စားမှု, သင်၏မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းကိုသာသင့် Guts အပေါ်အခြေခံပြီး "အထူးကစားနည်း" အောင်ရှောင်ရှားဖို့ကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည်သင်၏ယုတ္တိဗေဒကိုအန်တုပင်အခါ, ရိုက်ပုတ်တကရန်သူအဖြစ်စိန်ခေါ်မှု၏စဉ်းစားပါနှင့်အအေးမိဆုံးဖြတ်ချက်များပါစေ။
အမှန်တကယ်ငွေ Play စ
ထောက်ခံအုကူံပကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာ Blackjack ကစားစမ်းကြည့်ပါ!